Mareykanka oo Xayiraadaha Safarka ka Qaaday UK iyo Dalalka kale oo Yurub ah
HomeWararka CaalamkaMareykanka oo Xayiraadaha Safarka ka Qaaday UK iyo Dalalka kale oo Yurub ah
Mareykanka ayaa albaabada u furaya dadka safarka ah ee ka imaanaya liis dheer oo dalal ah oo lagu soo rogay xayiraado hore oo Corona ka dhalatay.
Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan oo ka socda Mexico, Canada, Boqortooyada Ingiriiska iyo Yurub inteeda badan, iyo sidoo kale Shiinaha, India, Koonfur Afrika, Iran iyo Brazil, ayaa loo ogolaan doonaa inay galaan Mareykanka garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha dhulka maadaama xayiraadaha la qaaday Isniinta.
Xakamaynta masiibada, oo asal ahaan la dhigay bilawga sanadka 2020, waxay ka mamnuucday gelitaanka Mareykanka dadka aan muwaadiniinta ahayn ee ku sugnaa wadamadaas 14 maalmood kahor safarka.
Xayiraadaha ayaa Sameeyay dalxiiska, iyaga oo ka hortagaya asxaabta iyo qoyska inay si fudud u booqdaan Mareykanka. Sida ku cad Warbixinada dad badan ayaa seegay aroosyada ay ka qeyb qaadan lahaayeen, aaska, dadka ka dhintay qoyskooda.